Kuwa aan nahaySu'aalaha Mar walba La isweydiiyo Wacyigelinta jaalka
Deeqda Gaargaarka Soogalootiga Washington ee COVID-19
Deeqda Gargaarka Degdega COVID-19— ee ka timid looguna tallogalay soogalootiga.
Soogalootiga hadaan nahay, waxaan Washington ka dhiganay gurigeena. Haddii aad tahay soogalooti wajahayo waqtiyo adag COVID-19 awgii, isla markaana aadan u qalmin gargaarka dhaqaalaha faderaalka ama cayrta shaqo la’aanta, deeqdaan adiga ayaa laguugu tallogalay.
Codso Deeqda Gaargaarka Soogalootiga Washington ee COVID-19 oo hel $1,000 lacagta bixinta tooska ah ee halka waqti (illaa $3,000 gurigiiba).
Codso 6-da Diseembar
Haddii aad caawimaad u baahan tahay, guji halkan, ama wac 1-844-724-3737 (Isniin ilaa Jimce 9:00 am – 9:00pm).
Waa maxay Deeqda Gaargaarka Soogalootiga Washington ee COVID-19?
Waxaan nahay soogalooti is caawinaya. Deeqdaan Gargaarka Degdega COVID-19—waxaa aas aasay sidoo kalena loogu tallogalay soogalootiga.
Lacag bixinta tooska ah
Hel jeeg ama kaarka lacagta halka mar ah (fiisa kaar) oo $1,000 qofkiiba, illaa $3,000 gurigiiba.
Ammaan ah in la codsado
Deeqdaan waxaa maamulo hay'adaha soogalootiga oo aan la wadaageyn warbixintaada dowlada.
Taageerada Dhanka luuqada
Waxaan halkaan u joognaa inaan ku caawino. Arjiga ama foomka codsiga wuxuu ku qoranyahay luuqado badan, waxaan ka jawaabi karnaa su’aalahaaga ama kugu caawinaynaa inaad ku codsatid taleefonka.
Wax badan ka baro deeqda
Yaa codsan karo
Si aad u codsato deeqda, waa inaad:
Ku nooshahay Gobolka Washington
Aadan u qalmin helitaanka lacagaha gargaarka faderaalka ama lacagta caymiska shaqo la’aanta sabab la xiriirto heerka soogalootiga
1. Ka hor inta aadan codsan, waa inaad:
Isu keentaa aqoonsigaaga loo baahanyahay iyo dokumintiyada daganaanshaha. Dib ayaad uga eegi kartaa liiska qoraalada la ansixiyay immigrantreliefwa.org
Xisaabi daqliga bil-laha isku celceliska qoyskaaga.
2. Taabo badhanka “APPLY” ee bogga codsiga kadib ku raadi badhanka “REGISTER” oo sameyso Akoonka SurveyMonkey Apply. Dhawr daqiiqadood kadib iska diiwaangelinta waxaad heleysaa i-meel aad ku xaqiijisid akoonkaaga. Fadlan hubi inaad xaqiijisid akoonkaaga.
3. Dhameystir dhammaan su’aalaha codsiga. Tani waxay qaadan kartaa waqtiga qaar. Waad keydin kartaa codsigaaga oo aad u soo laaban kartaa xili walba.
4. Markii aad ka dhammaatid arjigaaga hel badhanka cagaarka ee weyn ee “SUBMIT” si aad u gudbisid codsigaaga.
Haddii aadan rabin inaad onleenka ama internetka ku buuxbuuxiso foomka codsiga ama arjiga deeqda, halkaan ayaad ka daabacan kartaa foomka codsiga ama arjiga deeqda, kadibna waxaad kusoo diraysaa boostada P.O. Box #84327, Seattle WA 98124. [link to PDF for mailing]
Dokumintiyada loo baahanyahay
Ka hor inta aadan codsan, waxaad u baahantahay inaad diyaarsatid dukumentiyo muujinaya aqoonsigaaga iyo daganaashahaaga xilligan ee Gobolka Washington. Tusaale ahaan, waxaad bixin kartaa koobiga kaarka aqoonsiga Gobolka, leesinka darawalnimada, ama biilka korontada oo ku qoran magacaaga iyo ciwaankaaga. Eeg liiska dukumentiyada la ogol yahay oo dhammeystiran View the full list of acceptable documents in our FAQ.
Ammaano iyo illaalsan‍
Xogtaada marnaba ogolaanshaheena lagulama wadaagayo dowlada, ICE, hayadaha fullinta sharciga, milkiilahaaga guriga aad dagantahay, badroonigaaga, ama qof kale. Dadka kaliya ee heli karo warbixinta shaqsiga codsadaha waa Hay’ada Deeqda bixinaysa (hay'ada bulshada ee maareeynaysa deeqda) iyo Ururka Deynta Seattle (ee qeybinaya lacagta). Warbixinta oo dhan waxaa loo keydinayaa si illaalsan qaabka koodh leh marka lama geli karo.